कसैलाई छोड्न र कुनै स्वार्थ समूहसँगको सौदाबाजीका लागि सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकाे हाेइन : विमलेन्द्र निधि - Sunaulo Nepal
कसैलाई छोड्न र कुनै स्वार्थ समूहसँगको...
कसैलाई छोड्न र कुनै स्वार्थ समूहसँगको सौदाबाजीका लागि सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेकाे हाेइन : विमलेन्द्र निधि
आषाढ १७, २०७८ बिहिवार १९:२२ बजे
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधीले कसैलाई छोड्नका लागि र कुनै स्वार्थ समूहसँगको सौदाबाजीका लागि आफूले सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसंग विहीबार कुरा गर्दे उपसभापति नीधिले आफ्नो उम्मेदवारी कसैलाई छोड्नका लागि नभएको बताएका हुन् । पार्टीको १४ औ महाधिवेशन नजिकिदै गर्दा सभापति उम्मेदवारमा सहमति जुटाउन छलफल र परामर्शलाई तिब्रता दिएका नीधिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको संरक्षणका लागि र पार्टीभित्रको गुटउपगुटको अन्त्यका लागि आफुले पार्टीको नेतृत्व लिन चाहेको बताए । पार्टीले गर्न बाँकी रहेका कामहरुलाई आफ्नो अगुवाईमा सम्पन्न गर्ने गरि १३ औ महाधिवेशनका पदाधिकारीले सहयोग गरुन् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको उपसभापति नीधिले बताए ।
उनले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको रुख छापलाई जिताउनु नै आफ्नो प्रमुख उद्देश्य र कर्तव्य रहेको स्पष्ट पारे । नेपाली कांग्रेस बैचारिक र सांगठनिक रुपमा प्रष्ट र सक्षम हुँदै एकढिक्का भएर नेपाली जनतामाझ जान आवश्यक भएको भन्दै उनले त्यसपछि वर्तमान अवस्थामा देखिएका विविध क्षेत्रका विकृति हटाएर जनताको अपेक्षा अनुरुपको शासन सत्ता सञ्चालनको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसको नेतृत्व गर्न आफूले चाहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने “जनताले जिताएर जसलाई पठाईदियो प्रयोगशालाबाट देखि सकियो उनीहरुले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । अब त्यो जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको हो । त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले १४ औँ महाधिवेशनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको संरक्षण गर्नु, त्यसको स्वामित्व लिनु, त्यसलाई अझै सम्बर्द्धन गर्दै लगेर सफल कार्यान्वयन गरेर जनता र देशको हितमा कार्यासञ्चालन गर्नु आवश्यकता छ । त्यो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि म नेपाली कांग्रेसको सभापति को उम्मेवारको रुपमा प्रस्तुत गरेको छु । त्यसकारण छोड्नका लागि कोही अरुसंग सम्झौता गर्नका लागि वा तपाईले भनेजस्तो स्वार्थ समुह केही पनि होइन ।” उनले सत्तापक्ष र सरकारको वर्तमान शासन सञ्चालन प्रणाली र संविधानप्रति पनि इमान्दार नरहेको भन्दै प्रणालीको रक्षा र प्रर्बद्धनका लागि कांग्रेस ससक्त भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
केही दिन अघि भएको तीन जना शिर्ष नेताको भेटबारे चासो बढेको छ । तपाईको निवासमा भएको भेटपछि त बिमलेन्द्र निधिले अर्को एउटा समूह खडा गर्नुभयो भन्ने पनि छ । तीन जनाको भेट आफैँमा सामुहिक सौदाबाजीमा लागेको हो कि ? अर्को एउटा स्वार्थ समूहका लागि हो कि ? पार्टी भित्र अर्को एउटा गुट जन्मदै छ कि भन्ने पनि आशंका बढेको छ । यसलाई कसरी प्रष्ट पार्नुहुन्छ ?
नेपालको राजनीतिमा विश्लेषण मात्रै होइन अति विश्लेषण गर्ने बाँनी छ । फेसन पनि छ । स्वार्थ समूह पनि होइन । अर्को नयाँ गुट पनि होइन । केही पनि होइन । म पनि नेपाली कांग्रेसको दलीय राजनीतिमा, संगठनात्मक राजनीतिमा आजदेखि छैन । त्यो भन्दा पहिला म विद्यार्थी संगठनमा थिएँ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रक्रियामा (दरबारमा) हामी जेल गएका थियौँ । म पनि जेल गएको थिएँ । त्यसकारणले मैले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको लागि जब आफुलाई प्रस्तुत गर्दछु, त्यसमा स्वभाविक हुन्छ शेरबहादुर जी , रामचन्द्र जी , सिटौला जी संग पनि भेट्ने । प्रकाशमान जी, शशांकजी सँग पनि भेट्ने ।
प्रकाशमान जी पनि आजै राजनीतिमा लाग्नुभएको होइन । प्रकाशमान जी त पुर्व उपसभापति पुर्व महामन्त्री भइसकेको मान्छे हो । यो भन्दा पहिला पनि भेटघाट गरेकै हो । शशांक जी राजनीतिमा ढिलो आएपनि उहाँ त निर्वाचित महामन्त्री हो नि । नवलपरासीबाट त तीनपटक निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । त्यसकारण म आफुलाई सभापतिको उम्मेदवारको रुपमा प्रस्तुत गरिरहँदा म पहिलो कोशिष गर्छु सर्वसम्मति बन्नका लागि । सबैको तर्फबाट र्निविरोध सभापति बन्नु भन्ने चाहना हुनु स्वभाविक हो नि त । त्यसको लागि म घरमै बसेर हुन्छ र ? मैले सबैसंग भेट्नु पर्छ । मैले प्र्रकाशमान जी र शशांक जी संगमात्रै भेटेको भए एउटा कुरा हो । शेरबहादुर जीसँग भेटेको छु । रामचन्द्र जीसँग भेटेको छु । सिटौला जीसँग भेटेको छु । प्रकाशमान जी र शशांक जी सँग पनि भेट्दा लञ्च मिटिङ चाहीँ भयो । पहिले पहिले डिनर मिटिङ हुन्थ्यो । अहिले पनि भएका छन् । तपाईँहरुको ध्यान त्यतापट्टि गएन ।
अहिले प्रकाशमान जी, शशांक जी र मैले राजनीतिमा पदाधिकारी भइसकेका हौँ । नयाँ प्रवेश गरेको होइन । नयाँ आएको होइन । हामी हैसियतमा छौ । हैसियत भन्नाले एउटा भूमिकामा जिम्मेवारीमा छौ । हामी जिम्मेवारीमा भएकाले सामुहिक रुपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौ कि र सामुहिक रुपमा नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा युनाइटेड रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ कि ? त्यो प्रयास गर्नु त हाम्रो कर्तव्य पनि त हो नि त । त्यसै अर्थमा लिनुपर्दछ । यो कुनै नयाँ गुट निर्माण गर्नको लागि पनि होइन बरु गुटहरुको राजनीतिलार्ई भत्काउनका लागि सबैलाई समेटेर हामी हिड्नुपर्छ है भन्नका लागि हो । त्यस अर्थमा लिनुपर्छ । सभापतिको उम्मेदवार भएपछि प्रकाशमान जीको घरमा नै गएँ । दुई पटक भेटेँ । म सभापतिको उम्मेदवार हुन्छु तपाईको सहयोग चाहियो । भन्नुपरो नि त एक्लै आफैँले त जितिदैन नि त । त्यस्तै शशांक जी को घरमा पनि गएँ । अरु नेताको घरमा पनि गएँ । उहाँहरु पनि उम्मेदवार भनेर आफुले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यसकारण उम्मेदवारहरुबीचमा छलफल हुनु त सामान्य कुरा हो नि । नेपाली कांग्रेस र देशको राजनीतिको बारेमा साझा धारणा बनाउन सकियोस् भनेर हामीले केन्द्रीय समितिका अन्य सदस्यहरुसँग पनि छलफल गर्दैछौँ ।
म तपाईँको प्रश्नको आसय र सिद्धान्तसँग सहमत छैन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व हस्तान्तरणमा जहिले पनि जटिल छ भन्ने होइन । नेपाली कांग्रेस पार्टी नै यस्तो पार्टी हो, डेमोक्रेसीमा के भनिन्छ भने नि 'स्मुथ ट्रान्सफर अफ लिडरसिप' भनेको देखिन्छ । कस्तो छ भनेर । नेपाली कांग्रेसमा स्मुथ ट्रान्सफर अफ लिडरसिप देखिन्छ । यो डेमोक्रेसिको ब्युटी हो । यो निर्वाचन प्रणालीबाट भईरहेको छ । विपि कोइराकाले समयमा पनि निर्वाचन हुन्थ्यो । त्यसपछि त डेमोक्रेसी नै रहेन । जब डेमोक्रेसी रिस्टोर भयो नेपालमा, त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला जीले चुनाव लड्नुभयो र जित्नुभयो ।
शुशिल पनि चुनाव लड्नुभयो, जित्नुभयो । शेर बहादुर चुनाव लड्नुभयो, जित्नुभयो । नेतृत्व प्रणालीबाट नेतृत्वको हस्तान्तरण गर्ने पार्टी यदि नेपालमा कोही छ भने त्यो नेपाली कांग्रेस पार्टी हो । नेपालमा मात्रै होइन भारतमा पनि देख्निँ म । त्यसकारण नेपाली कांग्रेसमा जहिले पनि नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया जटिल हुन्छ भन्नेमा म सहमत छैन । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सभापति वा पदाधिकारीहरुको निर्वाचन ४÷५ हजार महाधिवेशन प्रतिनिधिले गर्दछन् । त्यो प्रतिनिधिहरु टीका लगाएर आएको होइन । निर्वाचन प्रणालीबाट तल्लो निकायबाट वडाबाट, वडाबाट पालिकामा, पालिकाबाट क्षेत्र र क्षेत्रबाट केन्द्रमा आउँछ । यसमा कसैले कसैलाई रोक्न सक्क्तैन । जसले मतदाताको भोट पाउँछ, त्यो निर्वाचित हुन्छ ।
यो अन्तत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुमाथि निर्भर रहन्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई कसरी प्रभावित गर्ने , आफ्नो पक्षमा कसरी पार्ने भन्ने कुरा उम्मेदवारमा भर पर्छ । कसैले कसैलाई नलड भन्दैन नि त कसैले जानी जानी फलानोको समर्थन पाईन भने म जित्न सक्दिनँ भनेर सोचेर आफै उम्मेदवार नहुनु एउटा कुरा हो । तर उम्मेदवार हुनका लागि कसैले कसैलाई रोक्दैन नेपाली कांंग्रेसमा । रोकेको पनि छैन । रोक्दैन पनि ।
निर्वाचन प्रणाली संसारमा लोकतन्त्रका लागि सबै भन्दा उत्तम उपकरण हो । निर्वाचन प्रणालीको पनि अवगुणहरु छन् । तर वष्ट मोडलहरु मध्ये सबै भन्दा वेष्ट मोडल भनेको निर्वाचन प्रणाली नै हो । हम्रा राजनीतिक शास्त्रीहरुले पठाउनुभएको पनि त्यही हो र लेख्नुभएको पनि त्यहि हो । नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनको सम्बन्धमा पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा जीले लड्छु भनिसकेपछि नलड्नुस् भनेर अनुरोध गर्नु एउटा कुरा हो । अधिकार त हो नि उहाँले । हामीले के भन्छौ भनेदेखि शेर बहादुरजी, रामचन्द्र जी, सिटौला जी नलड्दिए हुन्थ्यो । १३ औ महाधिवेशनका कोही पनि नलड्दिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । लागेर मात्रै त भएन नि त । लड्ुछु भनेपछि नलड्नु है भन्न त मिल्दैन । त्यसकारण राजनीति नै जटिल हुन्छ । राजनीतिक चीज नै , क्षेत्र नै जटिल चीज हो । निर्वाचन प्रणाली पनि जटिल हो । निर्वाचन प्रणालीलाई सम्पन्न गर्न, सम्पादन गर्न जुन स्वभाविक जटिलताहरु छन्, त्यो जटिलताहरु त हामीले व्यहोर्नुपर्छ ।
लामो समय पार्टी सभापति देउवाको विश्वास पात्रको रुपमा भरोसा पनि दिनुभयो । उहाँलाई नै प्रतिष्पर्धीको रुपमा देख्दा भेट्दा अलिकति असहज त हुन्छ होला । यस्तो अवस्था आउँदा बिमलेन्द्र निधीले शेर बहादुर देउवालाई छोड्छन् भन्ने पनि छ नि ।
महत्वपूर्ण निर्णय मैले हचुवा र हतारमा लिन्न । मैले सभापतिमा लड्छु भनेको छोड्का लागि होइन । मैले सभापतिमा उम्मेदवारी दिएको मुल उद्देश्य के हो भने , शेर बहादुर देउवा रामचन्द्र जी १३ औ महाधिवेशनका उम्मेदवार हुन् । उनले जति काम गर्नुपर्ने थियो । उहाँहरुले जति काम गर्नुपर्ने थियो देशको लागि पार्टीको लागि, गरिसक्नुभएको छ । उहाँहरुले अरु पनि काम गर्न बाँकी छ । फरक भूमिकामा उहाँहरुको सक्रियता हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।
पार्टीको कार्यकारणीको रुपमा उहाँहरुले गर्न बाँकी रहेका कामहरु मेरो अगुवाईमा होस् भन्ने चाहना हो । मेरो चाहाना के हो भने ढिलो चाडो मुलुकमा जे जे हुन्छ, आमचुनाव, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रदेशसभाको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन । प्रमुख रुपमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन जहिले हुन्छ त्यसमा नेपाली कांग्रेसको रुख छापलाई चिताउनु आवश्यक छ । नेपाली काग्रेसको सदस्यको हैसियतले मेरो कर्तव्य त्यो हो । मैले पहिले भन्दा बढी जिम्मेबार भएर नेपाली कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा जिताउनु पर्दछ । जनता र मतदाताको बीचमा नेपाली कांग्रेसलाई यसरी तयार गरौ, आम मतदातालाई लागोस् नेपाली कांग्रेस एक भएर आएको छ । नेपाली कांग्रेस ताजा भएको आएको छ । नेपाली कांग्रेस सक्षम भएर आएको छ ।
नेपाली कांग्रेस बैचारिक रुपमा पनि प्रष्ट भएर आएको छ, सांगठनिक रुपमा पनि प्रस्ट भएर आएको छ र नेपाली कांग्रेसले यो देशमा अहिले भाँडभैलो भइरहेको छ सबै क्षेत्रमा–राजनीतिक क्षेत्र, व्यवसायीक क्षेत्र, सामाजिकक्षेत्र , अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धको क्षेत्र , उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा ।नेपालमा धेरैको बलिदान भएर दुईवटा संविधानसभाको निर्वाचन मार्फत देशमा राज्यको पुर्नसंरचना गरेका छौ । रुपान्तरण गरेका छौ । संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता, यी सब निर्वाचन प्रणाली यो अहिलेको हामीले ल्याएको नयाँ प्रणालीको प्रमुख तत्वहरुको रुपमा रहेछ । हामीले संविधान जारी गर्यौ । गएको तीन बर्ष देखि के देख्दै छौ भने सत्तापक्ष र सरकारको प्रणालीप्रति पनि इमान्दारिता छैन । संविधानप्रति पनि इमान्दारीता छैन ।
हामीले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको रक्षा र सफल कार्यान्वयन गर्नु अहिले कुनै पनि राजनीतिक दलको जिम्मेवारी हो । अरु राजनीतिक दलले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेन । जनताले जिताएर जसलाई पठाइदियो प्रयोगशालाबाट देखिसकियो उनीहरुले त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन । अब त्यो जिम्मेवारी नेपाली कांग्रेसको हो । त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले १४ औँ महाधिवेशनबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय प्रणालीको संरक्षण गर्नु, त्यसको स्वामित्व लिनु, त्यसलाई अझै सम्बर्द्धन गर्दै लगेर सफल कार्यान्वयन गरेर जनता र देशको हितमा कार्यसञ्चालन गर्नु आवश्यकता छ । त्यो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि म नेपाली कांग्रेसको सभापति को उम्मेवारको रुपमा प्रस्तुत गरेको छु । त्यसकारण छोड्नका लागि कोही अरुसंग सम्झौता गर्नका लागि वा तपाईँले भनेजस्तो स्वार्थ समूह केही पनि होइन । मेरो एक मात्रै उद्देश्य त्यही हो । त्यसैका लागि मात्रै हो मेरो उम्मेदवारी ।
पहिला हामी सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आउनुपर्‍यो औपचारिक रुपमा । कांग्रेसको उम्मेदवार र मतदाता बन्नका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नै पर्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसकेपछि मात्रै टिम बनाउने हो । मेरो टीमको उपसभापति, महामन्त्री को हुने भन्ने अनौपचारिक छलफल मैले पनि गरिरहेको छु । बाहिर ल्याएको छैन । ल्याउनु जरुरी पनि छैन । उपयुक्त समय आएपछि ल्याउँछु ।
मुलुकको शासकिय प्रणाली अनुरुप पार्टीको विधान पनि भर्खरै परिर्वतन भएको छ । संघीय स्वरुप र समावेशीताको हिसाबले महिला जनजाति, दलितलगायतको सहभागिताको सन्र्दभमा अरु भन्दा भिन्न के छ ?
हाम्रो नेपालको समाज विविधताले भरिएको समाज हो । विविधताको पहिचान गर्ने हो भने अहिले थरिथरिको विविधता छ । जातिय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक विवधताहरु छन् ।
विविधताहरुलाई पहिचान गरेर स्वीकार गर्नुपर्छ । नेपालको लागि कुनै पनि विकासको योजनाहरु बनाउने क्रममा यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । यसलाई समस्या हो भनेर नकारात्मक भावना राखेर सोच्ने हो भने फेरि पनि अग्रगामी दिशामा जान सकिदैन । विविधता चाहीँ हाम्रो लागि सम्पत्ति हो । पूँजी हो । यो बरदान हो । यी विविधताहरुलाई हामीले शान्तिपुर्ण सम्मृद्धिको लागि, विकासको लागि प्रयोग गर्न सक्छौ । त्यसको लागि हामीले राज्यको संरचना कसरी निर्माण गर्न सक्दछौ । ती सबै कुरालाई सोचेर गर्नुपर्छ । सबै विविधताले शासन प्रणालीमा हाम्रो प्रतिनिधित्व छ भनेर अनूभुत गर्नुपर्दछ । हामी पनि छौँ । हाम्रो पनि ठाउँ छ । उसले शासन प्रणालीमा आफ्नो प्रतिनिधित्व देख्यो भने अनि न अपनत्व हुन्छ ।
त्यसकारणले म राज्यको निर्माण गर्दा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायत सबै ठाउँमा विविधताहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्‍यो । सबै विविधताको पहिचान, प्रतिनिधित्व र स्वामित्वको बोध गराउनुपर्छ । त्यो प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि जारी भएको संविधान । यो संविधान पनि हाम्रो हो है भनेर सबै विविधताले महसुस गर्दछ । यो सिद्धान्त र पद्धतिमाथि आधारित भएर हामीले समावेशीताको कुराहरु गरेका छौँ ।